SHAN KOE MEE ချစ်သူများအတွက် Money ကုန်တဲ့အခါ 10000 KS ယူနည်း
SHAN KOE MEE ချစ်သူများအတွက် Money ကုန်တဲ့အခါ ည12ကျော်ထိစောင့်စရာ
မလိုဘဲ 10000 KS ယူနည်းလေးပေးမယ်နော် LEVEL2ရောက်လို့ပိုက်ဆံကုန်သွားရင် Wheel Of Fortune လှည့်ပြီး ၁ နေ့ ၂ ခါ Free Bonus ရယူနိုင်ပါတယ် ပိုက်ဆံကုန်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြန်ဆော့ချင်တဲ့ဘ၀တူSHANချစ်သူ ဘော်ဒါတွေအတွက်
ဒီ POST လေးနဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်နော်
log in ၀င်ပါ
EMAIL ---မှာကြိူက်ရာပေးACCOUNT အမှန်ဖြစ်စရာမလိုပါ။နောက်က@gmail.comထည့်ေ်ပးပါ
PASSWORD နှစ်ခုမှာတူညီတဲ့ PASSWORD 8 လုံးလောက်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် CREATE ACCOUNT ကိုနှိတ်လိုက်ပါ။
ခဏ WAIT လိုက်နေပါ။
အခုဆို 10000KS နဲ့ SHAN ကစားလို့ရပါပြီခင်မျာကုန်လို့ထပ်ဆော့ချင်ရင်နောက် FLATE ACCOUNT
Using Mail Attachment Downloader
Mail Attachment Downloaderကတော့မိမိ mail ထဲက Attachment File တွေအားလုံးကို
Auto download လုတ်ပေးတဲ့ Software လေးပါ။အသုံးပြုရန်အတွက်ကတော့ download လုတ်လိုတဲ့
မိမိEmailနဲ့ password တို့ကိုရိုတ်ထည့်ပြီးConnect and Download Buttom ကို Click လုတ်ပြီး Download ရယူနှိင်ပါတယ်။ Save Location မှာလည်း မိမိ Mail ထဲက Download လုတ်တဲ့အခါ
Attachment ဖိုင်တွေသိမ်းရာလမ်းကြောင်းကိုလည်းသတ်မှတ်နှိင်ပါတယ်။ Default အနေနဲ့ကတော့
C:\_Users\_Yourcomputername\_Documents မှာသိမ်းပေးသွားမှာပါ လိုအပ်ရင်အောက်မှာ download လုတ်လိုက်ပါနော်။
Mail Attachment Downloader works with any standard IMAP or POP3 capable mail server including popular web mail providers like the following:
Auslogics Disk Defrag Professional_V_.4.3.6.0 Fullversion
မိမိ Window Hard Disk ရဲ့ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ဖိုင်တွေကိုစနစ်တကျမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်စီစဉ်ပေးမယ့်
Auslogics Disk Defrag Professional Fullversion လေးပါ။အောက်မှာ Down လိုက်ပါနော်..
AUTOCAD 2014 keygen လေးပါ။win32 ရော win64 အတွက်ပါနှစ်မျိုးထည့်ထားပါတယ်။မိမိသုံးစွဲ
တဲ့ window အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။serial Key များကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
AUTOCATSoftware ကိုတော့ အောက်မှာ down လိုက်ပါနော်။
PC Security TM is the ultimate in computer security, offering multiple locking systems for the windows environment and internet. Lock files, monitor programs activities, even detect intruders! PC Security offers flexible and complete password protection,support, plus many other handy features. All together, an incredible security package.
Install လုတ်ပြီးလို့ Password တောင်းတဲ့ Box ပေါ်လာရင်SECURITY ကိုအကြီးနဲ့ရိုတ်ထည့်ပေးပါ။
DOWNLOAD လုတ်တုန်းကရရှိထားတဲ့ Notepad ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး Name နဲ့ key ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
SIV- System Information Viewer
System Imformation တွေကိုတနေရာထဲကနေစုစည်းဖေါ်ပြပေးနိုင်တဲ့အသုံးဝင်တဲ့ Tools လေးတခုပါ။
win32 အတွက်ဆိုရင်တော့ Siv32xကိုRumရမှာဖြစ်ပြီး win64အတွက်ကတော့Siv64x ကိုRum ပေးလိုက်ရုံပါဘဲ။Installလုတ်စရာမလိုတဲ့Portable Software လေးလဲဖြစ်ပါတယ်။
Realtime Network Connection Speed - Traffic Monitoring
Net Meter is designed for those guys who wish to know their upload and download speed. If you want to know whether you have made full use of your bandwidth traffic.
Memory Optimizer Pro fullversion
Memory Optimizer Pro fullversionလေးပါ။ Memory ရဲ့ Speed ကို မြန်ဆန်စေခြင်းဖြင့်System ရဲ့
Performance ကိုတိုးတတ်ကောင်းမွန်အောင် Optimize လုတ်ပေးနှိင်တဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ Tool တခုဖြစ်ပါတယ်။
Smad AV v9.6.1 Fullversion With key
Feature အသစ်တွေထည့်သွင်းပါဝင်လာတဲ့Smad AV v9.6.1 Fullversion လေးပါ ။ Indo ထုတ် software လေးဖြစ်ပြီးသုံးရတာလည်းပေါ့ပါးပြီး USB Antivirus တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးကာကွယ်မူ့တွေကိုလုတ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်အောက်မှာDown လိုက်ပါနော်
Manage Tab ထဲမှ Name Serial ကိုDownload လုတ်တုန်းကရလာတဲ့Serial Smadav Pro + Cara Install note pad ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီးကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ်တည့်သွင်းပေးလိုက်ပါ။
revo Uninstaller Portable လေးပါ။Software uninstall လုတ်ခြင်းတွေအတွက်စနစ်တကျUninstall လုတ်ပေးမဲ့အသုံးဝင်တဲ့ Software လေးတခုဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်ရင် အောက်မှာ download လုတ်လိုက်နော်။
Avira Antivirus Crack Activate Fullversion
Avira Antivirus Crack Activate Fullversion လေးပါ။သက်တန်းက 1 ခွဲနီးပါးActivate ရရှိမှာမို့ Avira မိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်။အောက်က Link မှာဒေါင်းလိုက်ပါနော်။
Activation Code: တောင်းတဲ့ Box ပေါ်လာရင် License File ကို Click လုတ်ပြီး Download လုတ်တုန်းကပါလာတဲ့ Registry ဖိုင်ရှိရှာကိုရှာဖွေထည့်သွင်းပေးလိုက်ပါ။
အခုဆိုရင်4/18/2015 ထိ Activate ဖြစ်စေတဲ့ Avira Antivirus Full Version လေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Stellar Phoenix Windows Data Recovery v6.0.0.0 Technical Edition Crack Fullversion
В· Lost/Deleted Audio/Video Recovery - Allows recovery of audio and video files from lost, deleted, and formatted Windows Partitions.
В· E-mail Recovery - Recovers lost, deleted Emails from email clients, such as Microsoft Outlook and Outlook Express.
(2): Copy the crack folder content and paste it to the software installed directory.
Thank you all friend..:D
PLease!Join us on Facebook IT နည်းပညာ
By Nyuntnaingoo / +Admin
လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့IT ချစ်မိတ်ဆွေများကိုအထူးကျေး ဇူးတင်လျှက်****ညွန့်နိုင်ဦး****
နည်းပညာလမ်းပေါ်လျှေက်လှန်းလာမဲ့လူငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးဒီBLOG လေးကိုရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့ရဲ့BLOGကို လာလည်ကြတဲ့ချစ်သော ITမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကိုအထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်းဒီနေရာလေးကကပြောကြား ရင်းအတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားမယ် လို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့ရဲ့Postတိုင်းမှာ အတတ်နိုင်ဆုံးStep By Step လုတ်ထားပါတယ်။အဆင်မပြေတာများရှိ ခဲ့ရင်openeye123@gmail.comသို့ဆက် သွယ်နိုင်ပါတယ်။အားလုံးသောIT မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကိုလေးစားခင်မင်လျှက် ညွန့်နိုင်ဦး
ညွန့်နိုင်ဦး. Powered by Blogger.
<!-remember visitors -http://nyuntnaingoo.blogspot.com-->
SHAN KOE MEE ချစ်သူများအတွက် Money ကုန်တဲ့အခါ 100...
Post By***: ညွန့်နိုင်ဦး
Copyright © ITနည်းပညာ | Admin By*** ညွန့်နိုင်ဦး